/blog/Sunifiram/7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Sunifiram
Posted on 09 / 17 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Sunifiram.
Wax kasta oo ku saabsan budada Sunifiram
1.Sunifiram budada 314728-85-3 Qalabka kiimikada
2.Sunifiram (314728-85-3) waa aotop ama daroogo
3. Sunifiram (dm 235) - noocee noocee ah, maxaa
waa mabda'a ficilka, qiyaasta, dib u eegista
4.Sunifiram budada (314728-85-3)
5. Maxuu saameyn ku yeelanayaa Sunifiram?
6.Waa iyo qaabkee ayaa loo isticmaali jiray Sunifiram?
7. Maxay yihiin saameynta ay leedahay Sunifiram?
8.Waxaa la ogsoon yahay Sunifiram?
Sunifiram (DM-235) waa daroogo tijaabo ah oo u shaqeeya sida xeeldheeraha allosteric ee AMPA qaabilsanaha, 1 taas oo lagu muujiyey inay saameyn ku nootropic ah ee xayawaanka leh awood xoog leh ka badan ee piracetam. Qaybo xiriir la leh oo la xidhiidha ayaa la yaqaan, midna waa unifiram (DM-232).
1. Sunifiram budada 314728-85-3 guryaha Chemical
Lambarka CAS: 314728-85-3
2. Sunifiram (314728-85-3) waa buulle ama daroogo.
Dawooyinka loo yaqaan 'Nootropic tartiib tartiib tartiib ah, laakiin hubaal, waxay qayb ka yihiin nolosheena-buuxsantay, nolol walaac leh. Maanta waxay ku jiraan noocyo kala duwan, iyada oo dad badani ay ku jiraan marxaladda horumarinta iyo cilmi baarista, halka kuwa kale aan la aqoon.
Dawooyinka loo yaqaan 'Nootropic tartiib tartiib tartiib ah, laakiin hubaal, waxay qayb ka yihiin nolosheena-buuxsantay, nolol walaac leh. Maanta waxay ku jiraan noocyo kala duwan, iyada oo dad badani ay ku jiraan marxaladda horumarinta iyo cilmi baarista, halka kuwa kale aan la aqoon. Suuqa madow waxaa ka buuxa nootropics, Sababtoo ah baahida loo qabo iyaga ayaa sii kordheysa - dadku marwalba waxay rabeen inay isticmaalaan kaydka maskaxda ilaa ugu badnaan.
Daawooyin badan oo kooxdan ah laguma geyn karo Ruushka oo la iibiyo. Laakiin mamnuuciddu maaha mid xun. Tusaalaha muuqda ee qalabkan waa Sunfiram (mamnuucidda soo dejinta). Sida laga soo xigtay xogta rasmiga ah, isaga oo aan weli ku habooneyn tirada dadka ku filan imtixaanka lagama maarmaanka ah ee dadka. Si kastaba ha ahaatee, natiijooyinka cilmi-baarista cilmi-baariseed ee la heli karo waqtigan ayaa noo ogolaaneysa inaan ka soo baxno gabagabeyn ku saabsan wax-ku-oolnimada sare.
Dad badan ayaa horay u soo maray dhibaatada Sunifiram. Qaarkood waxay si buuxda u xalliyaan dhibaatooyinka caafimaad. Marka la eego xogta tijaabada ah iyo gebogebada saynisyahannada, daroogadu ma keenayso waxyeelo, haddi xitaa haddii aysan suurtagal ahayn in la ciribtiro cudurka, markaa, ugu yaraan, waxaa suurtagal ah in la joojiyo horumarkeeda iyada oo aan waxyeello jirka ka dhicin. Qodobkani waxaan jeclaan lahaa in aan muujiyo waxyaabaha gaarka ah ee isticmaalka Sunfire iyada oo ku saleysan xogta laga helay mawduucyada, waxaanad ka wada hadashaa suurtagalnimada iyo aan macquul ahayn iibsashada suuqa Suuqa Ruushka.
3. Sunifiram (dm 235) - noocee noocee ah, waa maxay mabda 'ahaan ficilkeeda, qaadashada, dib u eegista
Sunfiram (caanaha kiimikada C14HXUMXXXXXXXXXX) waa nooc ka mid ah dhismaha "pyracetam" oo la isku daray. Waxay leedahay saameyn isku mid ah inta ka hartay cunsuriyada, laakiin waa ka xoog badan oo aan ka yareynin ka hor horjoogaha. Dm-18 waa tallaabooyinka ugu muhiimsan ee dm-2 waa hawlgelinta AMPA duubayaasha, taas oo hubinaysa soo saarista neurotransmitter glutamate, oo la xidhiidha taas oo lagu tilmaamayo ampakines.
Glutamate ayaa kaalin muhiim ah ka qaadata xaaladda garashada, fahamkeedu wuxuu keenayaa in la xasuusto, dhibaatooyinka barashada, kartida diirada, iwm. Daraasadaha xayawaanka, waxaa la muujiyay in xataa xitaa xirmooyinka dabiiciga ah ee AMPA qaboojiyeyaasha, sunifirum ay kicinayaan soosaarka glutamate ee habka dhexe ee dareenka.
Intaa waxaa dheer, sida raajatam intiisa kale, Sunifiram waxay kordhineysaa waxqabadka beecmushtarka. Natiijo ahaan, saameynta daroogadu waxay keeneysaa saameyn sida:
• Wuxuu sahlaa xasuusinta;
• Waxay taageertaa qaabka qaabka habdhiska dhexe ee neerfaha inta lagu jiro mudada kordhinta maskaxda;
• waxay hagaajinaysaa isdhexgalka xannibaadyada u dhexeeya neur-mareenka;
• waxay xakameysaa waxqabadka muhiimka ah unugyada maskaxda;
• Isku dheelitir iyo kor u qaadista dheef-shiid kiimikaad ee maskaxda;
• waxay kordhisaa dareenka, diirada, sii xumeeyaa feejignaanta iyo aragtida;
• Wuxuu gacan ka geystaa hagaajinta xidhiidhka ka dhexeeya ciriiriga iyo wixii la mid ah.
Tilmaamaha la ansixiyay ee codsiga Sunifiram no. Daawada waxaa lagu maamulaa hal dose oo ah 10-50 mg. Dhaqan ahaan, qiyaasta shaqada ee dm-235 waa ugu yaraan xmUMX mg-daadin ah. Guud ahaan, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo waayo aragnimada codsiga nootropics waa yar tahay, marka loo eego adeegsadayaasha shisheeye. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in si taxaddar leh loo dhagaysto inta badan "golayaasha".
4. Dufanka Sunifiram Qiyaasta
Qiyaasta afka ah ee Sunifiram ee loo baahan yahay way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran xaaladaha isticmaalka, caqliga garashada waa 2.4-4.8g maalin kasta.
daroogada waxay saameyn ku yeelaneysaa in ay kiciyaan isbedelka gudbinta walxaha wargeysyada iyo sameynta unugyada dareemayaasha ee unugyada qumman qaarkood. Diyaargarasyadu kala duwan waxay caddaynayaan waxtarkooda habka dhexe ee neerfaha iyagoo keenaya isbeddel saxan maskaxda. Waxay kordhiyaan xoojinta iyo xusuusta waxayna kordhiyaan dhiirigelinta iyo niyadda. Tani waa sababta Sunifiram muddo dheer loo yaqaanay Jarmal waxaana loo isticmaalaa ujeedooyin kala duwan, oo ay ku jiraan gabow gabowga iyo caafimaadka. Sunifiram waa sharci waana laga iibsan karaa farmasiyada ama bixiyeyaasha internetka ee ku habboon.
Maaddaama saameynta gaarka ah ee diyaargarasyo ​​shakhsiyeed ay ka duwan tahay kuwa kale, wakiilka ku habboon waa in la soo xulo kahor bilawga daaweynta. Inkastoo qaar ka mid ah alaabta qaarkood dhiirigaliyaan hal-abuurnimo, haddana waxyaabo kale ayaa kordhiya sirdoonka Iyada oo daroogada Sunifiram sax ah waxaad ku gaari kartaa saameyn gaar ah, adoo ku xiran baahidaada shakhsi ahaaneed, waxaad siisaa dhiirigelin iyo feejignaan dheeraad ah, ama aad isku dhejisid adkeynta dheeraadka ah ee culeyska iyo cadaadiska xasuusta.
6. Xagee iyo qaabkee ayaa loo isticmaali karaa Sunifiram?
Daawooyinka waxaa badanaa lagu bixiyaa foomka kaabajka ah ee isticmaalka afka ah waxayna ku dhowdahay waxyeellooyinka soo noqnoqda, maaddaama maaddooyinka ay yihiin kuwo aan sun ahayn. Liiska Sunifiram wuxuu fududeeyaa helitaanka diyaargarow sax ah daaweynta kasta.
7. Waa maxay dhibaatooyinka soo raaca Sunifiram?
Haddii loo qaato daawada, maahan inaad ka filaato waxyeelo. Si kastaba ha noqotee, waqti ka dib, jidhku wuxuu u dulqaadanayaa daroogada. Ka dib qaadashada sii dheeraaday si tartiib tartiib ah ayuu u yareynayaa saameynta. Sidaa daraadeed, daaweyntu ma ahan in ay ka dheeraato inta lagu taliyey buugyaraha xirmada. Qaadaro badan, wakiiladu waxay leeyihiin saamayn dhiirrigelin leh, taasoo keeni karta is-baddal fudud ama raaxo la'aan.
8. Waa maxay khibradda Sunifiram loo yaqaan?
Isticmaalayaasha intooda badani waxay soo bandhigeen saameyn la isku halayn karo ee diyaarinta waxayna qeexeen khibradooda Sunifiram sida wanaagsan. Iyada oo walaxda, awoodda barashada iyo xasuusta waa la hagaajin karaa nolol maalmeedka. Intaas waxaa dheer, diyaargarowga waxay leeyihiin saameyn togan oo lagu xalin karo xaalado walaac leh. Waxay maskaxda ka ilaaliyaan weerarada jirka iyo maskaxda ee ay keenaan daroogooyinka ama barbiturates.
Diyaargarowga naftooda ma laha wax saameyn ah oo suuxdin ah. Sidaa darteed, badiba dadka isticmaala alaabooyinka noloshooda maalin walba iyaga oo aan wax cawaaqib ah samayn. Faytamoolajiyada, wakiilada waxaa sidoo kale loo yaqaannaa neuro-xoojiya ama smartpills loo isticmaalo si loo ilaaliyo loona hormariyo waxtarka garashada. Si kastaba ha noqotee, badeecooyinka waxaa inta badan loo isticmaalaa daaweynta cudurada hoos u dhigta dhaqdhaqaaqa maskaxda. Meelahaas, habka ficilka ayaa loo xaqiijiyay wakhti dheer waxaana dadka isticmaala ay soo bandhigaan natiijooyin aan fiicnayn ah.
Waqtigan xaadirka ah, dad badan oo caafimaad qaba ayaa sidoo kale u adeegsanaya macnaha xirfad sare iyo nolol maalmeed iyada oo loo marayo awood maskaxeed oo sareeya. Isticmaal a Sunifiram budada liiska, macaamil kasta ayaa heli doona diyaarinta ugu habboon ujeedadooda. Saamayn aamin ah ayaa haysata walaxda marka loo eego kororka foojignaanta. Sababtaas awgeed, macaamiil badan ayaa sheegatay inay u isticmaalaan badeecada inay tahay "maskaxda maskaxda" ee culeyska sareeyo inta lagu jiro daraasadda ama shaqada. Daawooyinka, marka lagu daro la qabsiga wanaagsan ee xaaladaha walaaca, waxay leeyihiin dhinacyo kale oo caafimaad sidoo kale. Waxay kordhiyaan hal-abuurka waxayna ka caawiyaan go'aannada adag waxayna yareeyaan ficilada dhicisoobay. Intaa waxaa dheer, qaababka hurdada ayaa isbedela, oo gacan ka geysta soo kabashada soo hagaagtay.
Ku iibso Drug Sponge Sunifiram online
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Suuqa Noopept 10 waxyaalood oo ay tahay inaad ogaato kahor intaadan qaadanin DMAA